Semalt: कसरी साइबर अपराधीहरूले तपाईं अनलाइन स्क्यामहरूको साथ छल गर्न सक्दछन्?
इन्टर्नेटले सबैका लागि असीम अवसरहरू खोल्यो। यो सरल छ। यो सुविधाजनक छ। यो अद्भुत छ। तपाईं शपिंग गर्न सक्नुहुन्छ, बिलहरू तिर्न सक्नुहुन्छ, फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ, समाचारहरू पाउन सक्नुहुनेछ, रिजर्भेसन गर्न सक्नुहुनेछ, द गो मा पनि बढि काम गर्नुहोस्। विश्वव्यापी जनसंख्याले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने नयाँ तरिकाहरूका रूपमा साइबर अपराधीहरू टाढा छन् तर निर्माणको सट्टा उनीहरू घोटाला गर्ने, ठग्ने र चोरी गर्ने प्रयास गर्दछन्। त्यसो भए, तपाईं कसरी अनलाइन जालसाजीहरूबाट सुरक्षित रहनुहुन्छ?
ठिक छ, उत्तर सरल छ: साधारण अनलाइन स्क्यामहरूसँग परिचित हुनुहोस् , म्याक्स बेलद्वारा निर्दिष्ट गरिएको, सेमेल्टको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, र तपाईं शिकार हुनुहुने छैन।
फिशिंग ईमेल घोटाला
यस वर्ष (२०१ 2017), फिशिंग ईमेलहरूको संख्या पठाइएको यो गत वर्ष भन्दा १ 155% बढी थियो। एक फिसि scam घोटाला सामाजिक मिडिया नेटवर्क मा वा ईमेल मार्फत गरिएको संचारमा आधारित छ। यहाँ, अपराधीले तपाइँलाई तपाइँको क्रेडिट कार्ड नम्बर, बैंक विवरणहरू, लगइन वा कुनै पनि अन्य व्यक्तिगत डेटा डिभालिंग गर्न मनाउने प्रयास गर्दछ। तपाईंलाई लिंक क्लिक गर्न पदोन्नति हुन सक्छ। यो तपाईंको प्रणालीमा डाटा-चोरी मालवेयर फैलाउने माध्यम हो। राम्रो र अपडेट गरिएको एन्टिभाइरस प्रोग्रामको साथ तपाईं यस घोटालाबाट टाढा रहन सक्षम हुनुपर्दछ।
नाइजेरिया 41१ scam घोटाला
यस घोटालामा सामान्यतया एक हृदय-रिन्चे email ईमेल, पाठ सन्देश, चिठी वा एक सामाजिक मिडिया खाता सन्देश समावेश छ जो एक महिलाले संकष्टमा पठाएको थियो। उनी दावी गर्छिन् कि उनी एक धनी वारिस, व्यवसायिक महिला वा सरकारी अधिकारी हुन् कि उनीसँग पैसा मागेको लागि मद्दतको लागि गुहार्दै जुन तपाईलाई एकमुश्त रकम प्राप्त हुन्छ। यहाँ समातिएको छ: तपाईं केहि शुल्क तिर्न सहयोग गर्नुहुन्छ बदलामा तपाईं ठूलो अंश पाउनुहुनेछ।
अभिवादन कार्ड घोटाला
यस योजनामा, तपाइँ एक साथी बाट एक 'हानिरहित' ग्रीटिंग कार्ड प्राप्त। जहाँसम्म, लिंक जुन यदि मालवेयर स्थापना गरियो भने कता कता कता कता हो कता ग्रीटिंग कार्डमा छिराइन्छ। मालवेयर एक अप्रिय कार्यक्रमबाट केहि हुन सक्छ जुन वेब ब्राउजरमा पप-अप विज्ञापनहरू वा अनपेक्षित विन्डोजहरू सुरू गर्दछ। सब भन्दा नराम्रो अवस्था मा, यो ransomware हुन सक्छ - सबैको दुःस्वप्न।
जब समय गाह्रो हुन्छ, व्यक्ति आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न विभिन्न युक्तिहरू अपनाउँछन्। यद्यपि तपाईले अफर पाउनुहुनेछ जुन सत्य हुन एकदम राम्रो छ। यो उदाहरण लिनुहोस्: तपाई घरको बाटोमा क्याबको पछाडि सिटमा बस्नुभयो भने तपाईले एउटा सन्देश पाउनुहुनेछ कि तपाईले पहिले नै स्वीकृत गरिएको loanण प्राप्त गर्नुभयो। यस घोटाला को लागी नगर्नुहोस्। सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस्।
यथार्थ रूपमा, सबैभन्दा पुरानो अनलाइन घोटाला। यो ईमेल मार्फत आउँछ। सन्देश सीधा छ: तपाईंले चिठ्ठा वा चराइ स्वीपस्टेक्समा नगद पुरस्कार जित्नुभयो, तर तपाईं आफ्नो पैसा दाबी गर्न, तपाईंले प्रशोधन शुल्क वा त्यस लाइनमा केहि भुक्तान गर्नुपर्नेछ। तपाईं विजेताहरूको संख्या देखेर अचम्मित हुनुहुनेछ जसले वास्तवमा भाग नलिई जितेका छन्।
यो प्रत्यक्ष जबरजस्ती चन्दा छ। अपराधीले तपाईंलाई पैसा तिर्दैन भने मार्ने धम्की दिन्छ। तिनीहरूले भन्ने छन् कि उनीहरूलाई तपाईंलाई पहिलो स्थानमा मार्न काममा लगाइएको छ, तर तिनीहरूले (हिटमेन) यसो भन्न माने कि तपाईंले उनीहरूलाई शान्तिपूर्वक छोड्नको लागि तिर्नुभयो। के डराउने तथ्य यो हो कि तिनीहरूले तपाईंको जीवन गतिविधिहरू पुन: गणना गर्न सक्दछन्।
यसले डेटि websites वेबसाइटहरूलाई लक्षित गर्दछ। योजना परिशुद्धता र छल संग महिनौं को लागी कार्यान्वयन हुन सक्छ। एक सम्भावित पार्टनरले तपाईंलाई उपहार दिएर बिस्तारै तपाईंको विश्वास हासिल गर्दछ। त्यसोभए एक दिन तिनीहरू आपतकालिन भएको दाबी गर्छन्। प्रायः आफन्तहरू बिरामी हुन्छन् वा नगदको अभावमा तिनीहरूको व्यवसाय ठप्प हुन्छ। तपाईंलाई त्यसपछि पैसा पठाउन सोधिन्छ जुन फिर्ता हुनेछ।
यहाँ तपाईं समाचारहरू पाउनुहुन्छ कि तपाईं आकर्षक पारिश्रमिकको साथ एक आकर्षक काम गर्नुभयो। त्यहाँ एक क्याच छ। काम सुरक्षित गर्नका लागि तपाईले केही शुल्क तिर्नु पर्छ।
ग्रीष्म orतु वा क्रिसमसमा जस्तै छुट्टिहरूमा देखा पर्दछ। यहाँ तपाईं एक धेरै सस्तो लागत मा एक राम्रो यात्रा प्याकेज प्रतिज्ञा गरिएको छ। शिकार बन्नबाट बच्न, उक्त वेबसाइटको समीक्षा जाँच गर्नुहोस्। यसले तपाईंको पैसा बचत गर्न सक्दछ।
नक्कली शपिंग वेबसाइट घोटाला - ग्लोबल ब्रान्डको प्रतिलिपि गर्दछ र नयाँ सामानहरू किन्नको खोजीमा अनपेक्षित अनलाइन शपर्सको प्रिय गर्दछ।
नक्कली समाचार घोटाला - आत्म स्पष्टीकरणात्मक।
नकली एन्टीवायरस कार्यक्रम घोटाला।